सोच को लागी खाना - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
जोन बेलले यस्तो काम गर्ने अवसर पाए जुन हामी मध्ये अधिकांशले कहिल्यै गर्न सक्नेछैनौं भन्ने आशा राखेका थिए: उनले आफ्नै मुटु आफ्नो हातमा लिए। दुई बर्ष पहिले, उनले हृदय प्रत्यारोपण गरे जुन सफल थियो। डलासको बेल्लर युनिभर्सिटी मेडिकल सेन्टरमा हार्ट टु हार्ट कार्यक्रमलाई धन्यवाद छ, अब उसले आफ्नो मुटु समात्न सक्षम भयो जसले replaced० बर्षसम्म उसलाई जीवित राख्यो यो बदल्नको लागि पहिले ...
"नमस्कार, मेरो नाम टामी हो र म एक" कानूनी विज्ञ "हुँ। मैले दस मिनेट पहिले मेरो दिमागमा कसैको निन्दा गरेको थिएँ। "सम्भवतः" बेनामी कानूनी विज्ञहरू "(AL) को बैठकमा पनि मैले त्यस्तो केही कल्पना गरेको थिएँ। म अगाडि जान्छु र वर्णन गर्छु कि कसरी मैले साना चीजहरू शुरू गरें; म विशेष हो भनेर सोच्ने क्रममा मैले मोजेक कानून पाएको छु। मैले त्यस्ता मान्छेहरूलाई नहेर्न कसरी शुरू गरें जसलाई उस्तै विश्वास थिएन ...
हामी मध्ये धेरैले धेरै लामो समयदेखि बाइबल पढिरहेका थियौं, प्राय: धेरै वर्षदेखि। परिचित पदहरू पढ्नु राम्रो छ र आफैंमा आफुलाई त्यस्तै लपेट्नु जस्तै ती तातो कम्बल हो। यो हुन सक्छ कि हाम्रो चिनारीले हामीलाई चीजहरूलाई बेवास्ता गर्न लगाउँछ। यदि हामी तिनीहरूको आँखा खुला र नयाँ परिप्रेक्ष्यमा पढ्छौं भने पवित्र आत्माले हामीलाई अझ बढी चिन्न र सम्भवतः हामीले बिर्सेका चीजहरू पनि सम्झन मद्दत गर्न सक्छ ...
«बारम्बार, हाम्रो समय अघिनै पनि, परमेश्वरले हाम्रा पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरू मार्फत विभिन्न तरिकामा कुरा गर्नुभयो। तर अब, अन्तिम पटकमा, परमेश्वर हामीसँग आफ्नो पुत्रमार्फत बोल्नुभयो। उहाँद्वारा नै परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो र उहाँलाई सबै कुराको लागि सम्पत्ति पनि बनाउनुभयो। उनको बुबाको ईश्वरीय महिमा पुत्रमा देखाइन्छ, किनकि उहाँ पूर्णतया परमेश्वरको स्वरूप हुनुहुन्छ। "(हिब्रू १: १- H एचएफए)। सामाजिक वैज्ञानिकहरूले शब्दहरू प्रयोग गर्छन् जस्तै ...
एक तातो दिउँसो म साना बगैचा मा मेरो हजुरबुबा संग एक किशोरी को रूप मा काम गरीरहेको थियो। उसले मलाई उसलाई पानीको जग ल्याउन भन्यो ताकि उसले एडम एले (जसको मतलब शुद्ध पानी) को एक लामो चुस्की लिन सक्छ। त्यो ताजा शान्त पानी को लागी उनको फूल अभिव्यक्ति थियो। जसरी शुद्ध पानी शारीरिक रूपमा स्फूर्तिदायी हुन्छ, परमेश्वरको वचनले हाम्रो आत्मालाई जीवन्त बनाउँछ जब हामी आध्यात्मिक प्रशिक्षणमा हुन्छौं। अगमवक्ता यशैया को शब्दहरु लाई ध्यान दिनुहोस्: «किनकि ...
नयाँ नियममा त्यहाँ एउटा स्पष्ट पद छ जसमा प्रेरित पावलले ग्रीसलाई ख्रीष्टको क्रूसलाई मूर्खता र यहूदीहरूका लागि उपद्रवको कुरा गरे (१ कोरिन्थी १:२:1)। यो बुझाउन सजिलो छ कि उसले किन यस्तो भनाइ गर्दछ। युनानीहरूका अनुसार परिष्कार, दर्शन र शिक्षा उच्च स्थानमा थिए। क्रूसमा टाँगिएको व्यक्तिले कसरी सबै कुरा जान सक्छ? यहूदी दिमागका लागि यो कराई थियो र ...
लुगा धुनु भनेको तपाईंलाई थाहा छ केहि चीजहरू मध्ये एक हो जबसम्म तपाईंले अरू कसैलाई यो गर्न नदिनुहोस्। कपडा क्रमबद्ध गर्नु पर्छ - गाढा र colors सेतो र फिक्का भन्दा अलग गरियो। कपडाका केहि चीजहरू सफा प्रोग्राम र विशेष डिटर्जेंटले धुनु पर्छ। मैले कलेजमा अनुभव गरेको कारण यो कठिन तरिकाले सिक्न सम्भव छ। मैले मेरो नयाँ राखें ...
पोखरी वा नदी?
सानो छँदा, मैले हजुरआमाको फार्ममा आफ्ना चचेरो भाईहरूसँग केही समय बिताएँ। हामी तल पोखरीमा गयौं र केही रोचक कुरा खोज्यौं। हामीले त्यहाँ रमाइलो गर्यौं, हामीले भ्यागुताहरू समात्यौं, हिलोमा लड्यौं र केही पातलो बासिन्दाहरूलाई भेट्यौं। वयस्कहरू आश्चर्यचकित भएनन् जब हामी घर फर्क्यौं प्राकृतिक घाँसले भरिएको, हामी छोडिएको भन्दा बिल्कुलै भिन्न। पोखरीहरू प्रायः माटो, शैवाल, साना प्राणीहरू र ... भरिएका ठाउँहरू हुन्छन्।
के तपाईंलाई याद छ जब परमेश्वरले यर्मियाको ध्यान कुमालेको डिस्कमा लगाउनुभयो (यर्मि। १:: २-))? कुमाले र माटोको छविलाई परमेश्वरले हामीलाई एउटा शक्तिशाली पाठ सिकाउन प्रयोग गर्नुभयो। कुमाले र माटोको छवि प्रयोग गर्ने समान सन्देशहरू यशैया 18,2 6..45,9 र .64,7 9,20..21 र रोमी .२०-२१ मा फेला पार्न सकिन्छ। मेरो मनपर्ने कपहरूमध्ये एउटा, जुन म अक्सर अफिसमा चिया पिउँदछु, मेरो परिवारको तस्वीर बोक्दछ। म उसलाई हेरिरहेको बेला ...
के तपाईं कहिल्यै ठूलो भीडमा जानु भएको छ जहाँ तपाईंलाई सानो र तुच्छ लाग्छ? वा तपाईंले एउटा विमानमा बस्नुभयो र याद गर्नुभयो कि भुईमा भएका मानिसहरू बगहरू जस्तै थोरै थिए। कहिलेकाहिँ हामी सोच्दछौं कि परमेश्वरको नजरमा हामी फोहोर जस्ता देखिन्छौं जुन फोहोरमा उडिरहेका छन्। यशैया :०: २२-२40,22 मा परमेश्वर भन्नुहुन्छ: उहाँ पृथ्वीको घेराभन्दा माथि सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ, र त्यहाँ बस्नेहरू फोहोरझैं छन्; उसले आकाशलाई यसरी तन्कायो ...
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि तपाईंले सबै कुरा बुझ्नुभयो र पछि फेला पार्नुभयो कि तपाईंलाई कुनै विचार छैन? कति आफैले कोशिश गर्ने परियोजनाहरूले पुरानो सल्लाहलाई पछ्याउँछ यदि सबै कुराले काम गर्दैन भने, निर्देशनहरू पढ्नुहोस्? निर्देशनहरू पढे पछि पनि मलाई समस्या भयो। कहिलेकाँही म प्रत्येक चरण ध्यान दिएर पढ्छु, यसलाई बुझेर समात्नुहोस् र फेरि सुरू गर्नुहोस् किनकि मैले यो सहि गरेको छैन ...
धेरै ईसाईहरु भन्छन् कि भगवान नियन्त्रण मा छ र हाम्रो जीवन को लागी एक योजना छ। हामी संग हुने सबै कुरा त्यो योजना को हिस्सा हो। कतिपयले यो पनि तर्क गर्दछन् कि भगवानले हामी सबै को लागी दिन को घटनाहरु लाई चुनौतीपूर्ण सहित व्यवस्था गर्दछ। के यो सोचाईले तपाइँलाई मुक्त गर्दछ कि भगवान तपाइँको लागी तपाइँको जीवन को हरेक मिनेट योजना बनाइरहनुभएको छ, वा तपाइँ यो विचार मा मेरो निधार मालाउनुहुन्छ जस्तै म गर्छु? के उहाँले हामीलाई स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छैन? के हाम्रा ...
"किन भगवानले मेरो प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्न?", यसको लागि त्यहाँ राम्रो कारण हुनु पर्छ, म सँधै आफूलाई भन्दछु। हुनसक्छ मैले उसको इच्छा अनुसार प्रार्थना गरेन जुन उत्तरको प्रार्थनाको बाइबलीय आवश्यकता हो। हुनसक्छ मेरो जीवनमा अझै पापहरू छन् जुन मैले पछुताएको छैन। मलाई थाहा छ कि यदि म येशू र उहाँको वचनमा हिंड्छु भने, मेरा प्रार्थनाहरूको जवाफ पाउने बढी नै सम्भावना छ। हुनसक्छ तिनीहरू शंकाहरू हुन्। प्रार्थना गर्दा हुन्छ ...
जब मैले हल्का छाला रोगको लागी उपचार गर्न थालें, मलाई भनियो कि १० मध्ये तीन बिरामीले औषधीको प्रतिक्रिया दिएनन। मैले कहिल्यै सोचेको थिइन कि औषधी व्यर्थमा लिन सकिन्छ र भाग्यशाली सात मध्ये एक हुने आशा राख्छ। म डाक्टरले मलाई यो कहिले पनि व्याख्या नगर्न रुचाएको हुन्थ्यो किनकि यसले मलाई मेरो समय र पैसा बर्बाद गर्न सक्छ भन्ने कष्टमा पार्छ र मलाई अप्रिय साइड इफेक्टहरू थिए ...
जेरेमी एक विकृत शरीर, एक सुस्त दिमाग, र एक पुरानो, असाध्य रोगको साथ जन्म भएको थियो जसले बिस्तारै उसको सम्पूर्ण युवा जीवन मारेको थियो। यद्यपि, उनका बुबाआमाले सकेसम्म उनलाई सामान्य जीवन दिने कोशिश गरे र उसलाई निजी स्कूलमा पठाए। १२ बर्षको उमेरमा, जेरेमी दोस्रो कक्षामा मात्र थिए। उनका शिक्षक डोरिस मिलर उहाँसँग प्रायजसो हताश हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो मा स्लाइड ...
केहि बर्ष अघि, एक अस्थायी हास्य कलाकार जो आफ्नो बुद्धिको टिप्पणीका लागि प्रसिद्ध थिए उनको 91 १ औं जन्मदिन मनाए। यो कार्यक्रमले उसका सबै साथीहरू र आफन्तहरूलाई सँगै ल्यायो र समाचार रिपोर्टरहरूले पनि राम्रोसँग भाग लिएका थिए। भोजमा एक अन्तर्वार्ताको बेला उनको लागि सब भन्दा पूर्वानुमान योग्य र महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो: "तपाईको लामो जीवनलाई कसलाई वा के श्रेय दिनुहुन्छ?" हास्यकारले कुनै हिचकिचाहट जवाफ दिए: "सास फेर्दै!" को असहमत हुन सक्छ? हामी सक्छौ ...
मेरी छोरीले हालसालै मलाई सोध्यो: "आमा, बिरालो छालाको एक तरीका भन्दा बढी नै छ"? म हाँसे उनलाई भनाइको मतलब के हो भनेर थाहा छ, तर उनीसँग यस गरीब बिरालोको बारेमा साँच्चिकै प्रश्न थियो। त्यहाँ केहि गर्न एक भन्दा बढी तरीकाहरू हुन्छन्। जब गाह्रो काम गर्ने कुरा आउँछ, हामी अमेरिकीहरू "राम्रो पुरानो अमेरिकी चातुर्य" मा विश्वास गर्दछौं। त्यसोभए हामीसँग क्लिचि "छ:" आवश्यकता भनेको आमाको आमा हो ...